रेनु तैले सेक्स गरेकी छेस्?…. – Ekathmandunepal
[ ७ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:१० ] साबधान ! मरेका खसी-बोकाको मासु बेच्दै ब्यापारी !	पत्याउनै गाह्रो
Homeब्लगरेनु तैले सेक्स गरेकी छेस्?….
रेनु तैले सेक्स गरेकी छेस्?….
२७ मंसिर २०७४, बुधबार २१:४४ ekathmandunepal ब्लग 0
उ पल्लोघरकी फुच्ची थिइ। गाउँका काकाकी छोरी उसको नाम रेनुका थियो। मायाले सबैले रेनु भन्थे। पातली थिइ, सलक्क परेकी। सानै देखि संगै खेलिन्थो, सगै पढिन्थ्यो। उसको घरमा बेलुका पढ्न जान्थे। ध्यान दिएर पढ्थ्यौँ। होनाहार विद्यार्थी थियौं। एसएलसी दिए पछि उच्च शिक्षाको लागि दुवै काठमाडौं आयौं। उ अनामनगर बस्थि, म सिनामंगल। काठमाडौं गएपश्चात खासै भेट हुन्थेन। दुवै आफ्नो आफ्नो पढाइमा व्यस्त थियौँ।
दसैंको मौकामा घर गएका थियौं। दसैंको बेला भने कलेजमा महिना दिनको छुट्टी हुने भएकाले घरमा टन्नै बसिन्थ्यो। घरमा हुँदा आवजाउ हुन्थ्यो। एक दिन घरमा रमाइलो गर्न रम खाने कुरा ताल मिल्यो। संगै बसेर रम खायौं। रम, भोड्का कलेज पढ्न थालेपछि खान सुरु भएको थियो। उसले दोस्रो या तेस्रो पटक खादैँ थिइ। सायद स्कुल पढ्दा सम्म मैले याद नगरेकको हुलाँ वा काठमाडौँ पुगेपछि उ जवान भएकी हुँदी हो। उसका स्तन बढेका थिए। शरिरबाट मिठो सुगन्ध फैलिएको थियो। रमको ग्लास उठाउँदा उसका छाती भित्रका स्तनका माथिल्ला भाग स्पष्ट देखिन्थ्यो। उसलाई ख्याल थिएन।
मेकअपमा खासै ध्यान दिन्थिन तैपनि निकै राम्री भएकी थिइ रेनु। पलेटी मारेर बसेकी थिइ हाफ प्यान्टमा। चिल्ला सेता खुट्टाले रक्सीको मातमा मन लोभ्याएको थियो। रक्सी खादै गफ गर्दै थियौं।घरमा सोधेरै खाएकाले रम खादाँ मज्जाले रमाइलो गरिदै थियो। उ हास्थी अनि केही घोप्टो पर्थी, मेरो नजर भने उसको पोटिला स्तन नियाल्न लालायित थिए। त्यहि माथी उसको कपालबाट आएको बास्नाले खपिनसक्नु भएको थियो। पलेटी मारेर बस्दा अब गाह्रो हुन सुरु भयो। अब उसले सायद नोटिस गरि।
‘के भयो दाई’, उसले सोधी।
‘तँ राम्री भइछस्’, मैले यसै भनिदिए। उ लजाइ मात्र।
काठमाडौं संगै फर्किने भयौं। चट्ट मिलेको ड्रेसअपमा सिगांरिएकी थिइ। बाटो भरी साइडको सिटमा उसको पर्फ्युमको बास्नाले असहज बनाएको थियो। कुरा गर्दै काठमाडौं पुगियो। उ फुपुको घर तिर लागि म कोठा तिर लागे।
कलेज चल्दै थियो, रमाइलोसंग। निकै महिना पछि एक दिन शुक्रबार रेनुको फोन आयो।
‘दाई आज यता आउनु न , रम खाने’, उसले फोनबाटै निमन्त्रणा दिई।
‘ल म कलेज सकेर आउँला, बेलुका।’
कलेज ५ बजे बिदा हुन्थ्यो। कलेज ड्रेसमै गएको भए हुन्थ्यो तर भोलीपल्ट शनिबार भएकाले कोठामा पुगे, लुगा फेरे अनि अनामनगर तिर लागे। पुग्दा साढे पाँच बजेको थियो। फुपु फुपाजु बुटवल जानुभएको रहेछ। घरमा डेरामा बस्ने थिएनन। आगनमा ठुलो बगैँचा थियो। घरको कम्पाउन्डमा अग्ला पर्खाल थिए अनि लहरै लहराले अग्लोसम्म ढाकिएको थियो। जंगलै जंगलको बिचमा भएको भान गराउने वातावरण थियो।
‘जाम एक छिन घुमेर आउँ।’
‘ठमेल तिर’, उसले भनि।
एकै छिनमा ठमेल पुगियो, बाइकको पछाडी चपक्क टाँसिएकी। गर्मीको महिना थियो, उसले वान पिस लगाएकी थिइ। घुडाँ भन्दा तल सलक्क परेका सेता खुट्टा थिए। क्लिभेज देखिने गरि छातीमा कम कपडा थिए। स्तनको डोम कपडा बाहिरबाटै प्रस्ट थियो। चपक्क टाँसिएकी उसको स्तनले मेरो ढाडमा स्पर्श गर्थो। त्यो स्पर्श बढाउन अलि जोडले ब्रेक लगाउँथे।
ठमेल पुगेपछि एउटा रेस्टुरेन्टमा छिरियो अनि हुक्का र ह्विस्की मगाइयो। म:म, तास अनि सलाद संगै त्यो होहल्लमा हुक्का तान्दै दुवैले ह्विस्कीको मज्जा लियौं। अबेर भए मापसेमा पर्ने डर, झमेलामा पर्नु भन्दा छिट्टै निस्कने सल्लाह भएपनि साढे आठ त्यहि बज्यो।
पौने नौ मा त घरमै पुगियो।
सायद उसलाई मलाइ भन्दा बढी नै मात लागेको थियो। त्यो एकान्त घरमा छिर्ने बित्तिकै उ लाडिदैँ जिस्किन थाली।
रक्सीले उसमा मात चढेको थियो। सोफामा उत्तनो परेर ख्यालै नगरि पल्टिइ। अर्को साइडमा रमरम रक्सीले छोएको ममा बिस्तारै मात चढ्न थालेको थियो। उसले अनायासै लुगा खोल्न खोजी, सुतेर सम्भव थिएन।
दुवैलाइ रक्सीको मातले त्यो रातको अर्थ तिर लम्काउँदै थियो। उत्तानो परेर बसेकी उसलाई उठाए, अनि दुवै हातलाई समाते। यति गर्दानै म तातिसकेको थिए। उ झ्याप्पै ओठ जोड्न आइपुगि। नसोचको कुरा भयो, अब रोकिनुपर्ने कुनै कुरा बाँकि रहेन।
दुवै हात उसको घाँटी पछाडि अनि अर्को हात टाउको पछाडी, रेनु संगको त्यो किस भुल्न नसकिने थियो। उ तात्दै थिइ। सेता साप्राले मेरो खुट्टा चेपेको थियो।
परपर सम्म आवाज सुन्ने कोही थिएन। उसका वान पिस खोलिदिँए। ब्रा भित्रका ती पुट्ट स्तन निकै कामुक थिए। बाहिर बाटै स्तन मुसारेँ। उसले आँखा चिम्लिएकी थिइ। ओठ खुलेका थिए। अनुहारमा कामुक भाव थियो। पेन्टी र ब्रामा मात्र उभिएकी उसलाई अर्को कोठाको खाटमा लगे।
उसका ओठ, घाँटी, पाखुरा, अनि छाती चुस्न थाले। उ उत्तेजित हुँदै थिइ। उसले हात लम्काए अनि टिसर्ट खोलिदिइ। बेल्ट लगाएकाले प्यान्ट आफैले खोले।
‘रेनु! तैले सेक्स गरेकी छस्?’
उसले गरेकी छैन, थाहाहुँदा हुँदै पनि सोधेको थिए। उसले जवाफ दिइन। उल्टै अंगालोमा कसले जिब्रो चुस्न थाली। मेरा हात उसको ब्रा खोल्न तिर लाग्यो। आहा! रेनुका ती पोटिला साना, कसिला स्तन। उत्तेजित भएर स्तनका मुट्टा कडा भएका थिए। अब उसको स्तन चुस्न लागे। जिब्रोले खेलाउन थाले पछि उसका कामुक आवाजको चर्को हुँदैथियो।
निर्धक्क उ कराउँदै थिए, ‘आहह…,’
लामो स्वास तान्दै उ सलबलाउदै थिए। एक हात पेन्टी भित्र घुसारे। उसका कलिला पुती भिजेको थियो। रौं अहिलेसम्म काटेकी रहिनछ। त्यसैले नरम थिए, तर छोटा थिए। पेन्टी फुकालेर पुती चुस्न लागे, उसको पुतीको बासना सुगन्धले भरिएको थियो। लाडो ठन्केर पेन्टीको साइडबाट बाहिर निस्किसेकको थियो।
उ कराउन लागि, टाउकोमा समाति अनि पुती तिर मेरो मुख जोताई। म निरन्तर उसको पुतीमा जिब्रोको कला प्रयोग गर्दै गए। उ उत्तेजित आवज निकाल्दै थिए। दाई दाई! अँ…अँ… उसका आवाजले शरिरभरी कम्पन ल्याएको थियो। उसका स्तन मुर्सार्दै उसको जवानीको मज्जा लिन थाले। निकै बेरमा हामी बिचको क्रिडा सम्पन्न भयो। अनि नियमित भेटेको बेला ठाउँ मिलाएर आफ्ना यौनाङ्ग जोड्ने गर्ने थाल्यौँ।
लोग्ने भएर मात्रै के काम गर्दा ५-६ पटक मात्र घर्षण त्यसपछि…
बुढाको भन्दा त तपाईंको ठुलो रहेछ (547)
मैले मेरो २० बर्से दिदी सँग यसरी रात बिताएको थिए… (446)
खुट्टा फर्किने भनेको के हो ? किन फर्किन्छ खुट्टा ? (204)
सानिमालाई सेक्सको प्रस्ताव राख्दा… (204)
फिल्ममा आउँनु अघि यस्ता थिए नेपाली चलचित्रका चर्चित… (121)
यौन सम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेर्नु सहि कि गलत ? (114)
बच्चा जन्माउनका लागी सेक्स गर्ने ६ वटा उत्तम… (98)
स्तन र योनी कत्रो हुनुपर्छ ? (90)
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,466)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,386)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,252)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,814)
जंगलमा महिलासंग यौन क्रिडा गरिरहेको भिडियो भाइरल… (2,676)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,580)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,398)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,385)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,342)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,219)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,217)
सामाजिक संजालमा फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक… (2,213)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,211)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (2,024)
“भाउजु, कति दिन तड्पेर बस्नुहुन्छ ? आज म तपाईंको… (1,962)